Ibhendi yokumelana ne-Hip
Iibhendi zethu zenziwe ngezinto zepremiyamu ye-premium kwaye zibanjelwe kwimigangatho ephezulu kakhulu enokwenzeka, ezi bendi azishukumi kwaye aziyi kuqhekeza okanye ziqengqeleze emilenzeni yakho ngelixa usebenza ibandakanya incwadi yokuziqhelanisa equkethe ezona ziluncedo zomlenze kunye nezomzimba zokuqinisa ukubambisa, ikwabandakanya nebhegi enomthwalo kunye neziphathekayo zokuhambisa iminatha kwiihambo ezikufutshane nakude.
Iileybhile ezimbini zambathiselwe ngaphezulu kweplash ethambileyo kwaye ithambisa kakhulu ukonwatyiswa okuphezulu, imibala eqaqambileyo yemibala ngokhetho lwakho, ekhululekile ukunxiba kwaye yomelele, ii-sweatbands ezi-elastic zine-elasticity elungileyo ezenza zilungele amadoda nabafazi, zilungele yonke imidlalo, ukungahambelani, i-organic engahambelaniyo nokugcina ujongeka umhle.
Ukunyusa ukunyusa okuthe xaxa kubushushu kunye nokubila xa kusetyenziswa ngexesha lokuzivocavoca; Ukuntywila kunye nokuguquguquka ukuze uhlengahlengise ubungakanani bakho nobungakanani. Yolule ngokulula kwindawo yakho yethanga. Ibandakanya i-trimmers ezi-2 zokuqala ze-neoprene yethayile yokugqibela yokuthuthuzela; Imathiriyeli ehleliyo yeNkxaso eyomeleleyo; Isitayile esiqhekezayo kulula ukusibeka kwaye sikhuphe; Inkxaso yeNeoprene inceda ukugcina imisipha yamathanga iqinile kwaye ikhuselekile
Umkhono wamathole enyathi
Ilaphu elenzelelweyo le-yinayiti ligcina ulusu ulomile, uxinzelelo olusebenzayo livumela ukusetyenziswa kweeyure ezingama-24, nokuba ulele. Ngendlela yokuphumla kunye nengqondo ebonakalayo phantsi kweengubo zokwenza umsebenzi okanye ukuvuselela, iteknoloji yokuchasana nephunga, ilawula ubushushu bomzimba, ngokwemvelo anti-bacteria kunye ne-anti-harufu. Uxinzelelo oluphumeleleyo lubeka umda ukudumba kwaye luyonyusa ukuphuma kwegazi, lunceda ukunciphisa iiplints ze-shin